URamaphosa uvele enamandla kakhulu | Scrolla Izindaba
URamaphosa uvele enamandla kakhulu
Isothombe: ku-Instagram @MyANC
UMengameli uCyril Ramaphosa uvele enamandla kakhulu emhlanganweni wekomidi elikhulu kuzwelonke le-ANC ngempelasonto equmba phansi izinselelo eziphonswa ngabahlambalazi abaseqenjini.
Beyakwimpelasonto amanye amalungu ekomidini elikhulu kuzwelonke amemezele ukuthi uMengameli esule esikhundleni.
OwayenguMengameli uJacob Zuma ubephakathi kwalabo abebenamagama anzima kuRamaphosa.
Amanye amalungu amangazwe incwadi kaMengameli enamakhasi ayisikhombisa abethi kuyo amalungu e-ANC akhaphele izwe ngezenzo zayo zenkohlakalo, ikakhulukazi ngamathenda e-Covid-19.
Le mpelasonto ikhombisile ukuthi iningi lamalungu e-ANC avumelana noMengameli ngesifiso sakhe sokulungisa inkohlakalo eseqenjini kanye nakuhulumeni.
URamaphosa uwahlehlisile amacala ezenzo ezimbi zomkhankaso we-CR17 wobongameli be-ANC kowezi-2017 kanti futhi uzinikele ekomidini elethembekile leqembu.
UNobhala-Jikelele uAce Magashule manje naye kuzomele avele phambi kwekomidi elethembekile leqembu.
Okubaluleke kakhulu, Iziphathimandla zokushushisa kuzwelonke zilungiselela ukwenza izinga eliphezulu lokubopha kanye nokuletha izikhulu zenkohlakalo enkantolo ukuzoqula amacala azo.